ढिलो सुत्नु के तपाईंको स्वास्थ्यको लागि खराब हो? तपाईंको स्वास्थ्य त बिग्रन्न थापाउनुहोस पहिलै | Khabar Sadan खबर सदन
Home अर्थ ढिलो सुत्नु के तपाईंको स्वास्थ्यको लागि खराब हो? तपाईंको स्वास्थ्य त बिग्रन्न...
ढिलो सुत्नु के तपाईंको स्वास्थ्यको लागि खराब हो? तपाईंको स्वास्थ्य त बिग्रन्न थापाउनुहोस पहिलै
दिनको सुरूवात सहि दिनको बर्ष बढि उत्पादकत्व र फोकस हुन सक्छ। यस तथ्यले वर्णन गर्दछ किन हामी सूचिको लागि छौं कि सफल मान्छेहरूको बिहान बानी प्रकट। यस्तो देखिन्छ कि तिनीहरू सँधै समान अन्तरदृष्टि प्रस्ताव गर्दछन्: चाँडै उठ्नुहोस्। केभिन ओ’एलरी, अन्ना विन्टोर, र राष्ट्रपति ओबामा धेरै हुन् जो प्रभातको क्र्याकमा उठ्छन् र त्यसपछि काममा जान्छन्। अब, नयाँ शोध छ अझ बढि दृढताका साथ चाँडै उठ्ने को लाभ लाई सुदृढीकरण गर्न।
नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटी अफ साइन्सडिलीमा फेइनबर्ग स्कूल अफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित अध्ययनको नतीजाहरु अनुसार, बिहान ढिलो सुत्नु तपाईको बिहान लात हिर्काउने एक अस्वास्थ्यकर तरीका हुन सक्छ।अध्ययन सहभागीहरु मध्ये, जो ढिलो सुते उनीहरु दिनभर अस्वस्थ निर्णयहरूको गर्न गए। तिनीहरूले अधिक छिटो खाना खाए। तिनीहरूले थोरै तरकारी खाए। र तिनीहरू शारीरिक रूपमा सक्रिय थिएनन्। यो विशेष गरी अध्ययनका पुरुष सहभागीहरूका लागि सही थियो। यस अध्ययनले १ १८-५० उमेरका स्वस्थ वयस्कहरूलाई पछ्यायो जो नियमित रूपमा हरेक रात साढे छ घण्टा भन्दा बढी निदाउँथे।
सात दिनसम्म, सहभागीहरूले खाना डायरीहरू राखे र सेन्सेयर वेयर आर्म्बान्ड लगाउँथे शारीरिक गतिविधि ट्र्याक गर्नका लागि। “हाम्रो परिणामले हामीलाई समयावधि बाहेक निद्राको समयले मोटोपनाको जोखिमलाई कसरी असर गर्न सक्छ भन्ने बुझ्न थप मद्दत गर्दछ,” प्रमुख अन्वेषक र न्यूरोलॉजीका सहयोगी प्राध्यापक केली ग्लेजर ब्यारनले अध्ययनका निष्कर्षहरूको बारेमा भने।
“यस्तो सम्भावना छ कि खराब आहार व्यवहारले ढिलो निद्रा भएका व्यक्तिहरूलाई तौलको बढि जोखिम बढाउन सक्छ।” अन्वेषकहरूले यो दावी गर्दैनन् कि ढिलो जागेर मान्छेहरु लाई पछिल्लो दिनमा अस्वास्थ्यकर निर्णय गर्दछन्। तिनीहरू केवल रिपोर्ट गर्दै छन् कि बिहान मान्छेहरू राम्रो खान र अधिक सार्न रुचाउँछन्। अध्ययन किन यो घटना हो भनेर सिद्धान्तमा जान सकेन। हुनसक्छ यो ढिलो निद्रामा परेका मानिसहरु कहिल्यै ट्रेडमिलमा पस्ने छैनन वा पहिलो स्थानमा खाजाको लागि एक पालक सलाद खाने। जो चाँडै उठ्छन् तिनीहरूले त्यसो गर्न सक्दछन् किनकि उनीहरूसँग बिहान-बिहानको कसरतको योजना छ वा दिनको बाँकी दिन स्वस्थ खाना तयार गर्न बिहान खर्च गर्नुहुन्छ।
Previous articleके अब बन्‍ने नै हो त सगरमाथामुनी रेलमार्ग ? नेपालमा रेल आउनेनै हो त ?
Next articleआज हेर्नुहोस कस्तो छ तपाईंको भाग्य र पाथिभरा माताको दर्शन गरौ, आज – १३ आषाढ २०७८ आइवारको राशिफल हेर्नुहोस